Naya Drishti | अनुभुति । सान्दाजु म जिल्ला फर्किदै छु , के छ सन्देश ? - Naya Drishti अनुभुति । सान्दाजु म जिल्ला फर्किदै छु , के छ सन्देश ? - Naya Drishti
अनुभुति । सान्दाजु म जिल्ला फर्किदै छु , के छ सन्देश ?
म सानै थिए । विपि कोइराला सँग मेरो भेट बनारसमा पनि भयो तर त्यो भेटलाई म त्यति परिपक्क ठान्दीन । किनभने त्यो एउटा हुलमुलको बसाई थियो र म पनि उमेरले अपरिपक्क थिए ।
२०३९ साल साउन ६ गते उहाँको दहावसन भयो । त्यस भण्दा पहिला २०३३ मा उहाँ राष्ट्रिय मेलमिलापको निति लिएर काठ्माण्डौ आएपछि ( खास गरेर जनमत संग्रह अगाडि र पछाडिका बर्षहरुमा) उहाँ सँग लामो अन्तरक्रिया, कुराकानी र संगत गर्ने हैसियत मिल्यो ।
उहाँकै मुख्य आतिथ्यतामा भएका कार्यक्रमहरुमा सल्यान जिल्लाको तर्फ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाए । आफ्ना कुराहरु राख्ने शिलशिलामा उहाँ बाट आसिर्वाद पनि प्राप्त भयो । ति सुखद क्षणहरु आज पनि ताजा संम्झना छन ।
विपि कोइराला एउटा टावरिङ् प्रसनालिटी ( उच्च व्यक्तित्व ) हुनुहुन्थ्यो । मान्छेहरुले त्यसै उहाँलाई देवत्वकरण गरेका होईनन् । त्यसै महामानव भनेका होईनन् । उहाँको व्यक्तित्व, कृतित्व, संघर्षशिलता, नेता कार्यकर्ता माथी विस्वास र सद्भाव, कुटनितिक क्षेत्रमा अंगिकार गरेको निति, नेहरु देखि पृथक विचार राख्ने माओ र फिडेल क्यास्ट्रो लगाएत सवै बिचार राख्ने नेताहरु सँग सहकार्य, कुटनितिक एवं मित्रवत सम्बन्धले उहाँमा विलक्षण प्रतिभा थियो ।
नेपाल जस्तो सानो मुलुकको नेता लोकतान्त्रीक समाजवादीहरुको अन्तराष्ट्रिय संस्थाको उपाध्यक्ष हुने भनेको चानचुने थिएन । सबैको विद्धता बाट, प्रतिभा बाट स्वंम पनि आकर्षित हुने, प्रभावित हुने र आफ्नो प्रभाव पनि बिस्तार गर्न सक्नु उहाँको सबै भण्दा ठुलो क्षमता हो ।
आज विपिलाई काङ्ग्रेसले मात्रै नभएर हाम्रो भण्दा फरक बिचार राख्ने व्यक्तिहरुले पनि संसारभर स्मरण गरेका छन । त्यो उहाँको व्यक्तित्वको उचाईको गुरुत्वले भएको हो ।
उहाँमा समाजको, समाजका विभिन्न अवयवहरुको, तन्तुहरुको सुक्ष्म बिश्लेषण र सस्लेशन गर्न सक्ने तथा नेपाली समाजको मात्र होइन विश्व राजनितीको चिरफार गर्न सक्ने विलक्षण प्रतिभा थियो ।
भोली हामि यो ठाउँमा जादैछौ । भोलीको राजनिति, अर्थनिति र विश्व यो ठाउँमा जादैछ भन्न सक्ने दुरदृष्टि र दुरगामि सोचले विपि कोइरालाको उचाई बढाएको थियो ।
त्यतिवेला विश्व दुइ ध्रुर्वमा वाडिएको थियो । साम्यावादी मुलुको नेतृत्व रुसले गरेको थियो भने पुजिवादी देशको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको थियो । त्यतिवेला आफ्नो उच्च अध्ययनको कारणले विपिले के भन्नु भयो भने यि २ वटै कुरा हुदैन । पुजीवाद जसरी अगाडि बढेको छ, यसले सामाजिक न्याय दिन सक्दैन र हामिले खाली वितरणको (साम्यवाद) मात्रै कुरा गर्याै भने त्यसले पुजी निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले हामिले मध्यम धारको राजनिति गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई पनि स्थापित गनुपर्छ । जनताको मनोविज्ञानमा पनी जानु पर्दछ ।
उहाँले धेरै ठाउँमा भन्नु भएको छ– मान्छे इश्वर पनि हुन सक्दैन तर मान्छे त्यो भन्दा पनि तल झर्न सक्दैन । मान्छे, मान्छे नै हो । त्यसैले यहि बिचमा हामिले मानिसको, मानविय स्वभाव र चरित्रको अध्ययन गर्नु पर्दछ । मानविय संवेदनालाई त्यहि भित्र बाट झिकेर लिनु पर्दछ र त्यहि संवेदनको हाराहारीमा हाम्रो राजनितिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । जव संवेदनाको कुरा आउछ, त्यहाँनेर लोकतन्त्र आउछ । मानविय स्वतन्त्रता नै प्रमुख मुद्धा बन्छ ।
यसरी विपिले प्रजातन्त्र प्रतिको आफ्नो निष्ठालाई जसरी मानविय संवेदना सँग जोड्नु भयो । त्यो आफैमा एउटा नौलो धार थियो । उहाँले प्रजातन्त्रलाई खाली राजनितिक पद्धती सँग मात्र जोड्नु भएन । मानविय स्वाभाव र संवेदनालाई पनि अगाडि सार्नु भयो ।
उहाँ भन्नु हुन्थ्यो – मान्छेका लागी रोटि अनिवार्य हो तर रोटिले मात्रै पनि मान्छे बाँच्दैन । मान्छे (ब्रेन) मस्तिष्क बाट चल्छ । संवेदना बाट चल्छ र त्यो मानविय संवेदनाकै पक्षमा हामिले राजनिति अगाडी बढाउनु पर्छ । यहीनेर लोकतन्त्रको कुरा आउछ । त्यसैले यसलाई अलग गरीकन हामिले मानविय राजनिति गर्न सक्दैनौं ।
समाजवाद वारे विपि भन्नु हुन्थ्यो – प्रजातन्त्रको कुरा गरेर मात्रै पनि हुदैन । मान्छेले पेट पनि भर्नुपर्छ । त्यसको लागी आर्थिक क्रियाकलापहरुको आवस्यक्ता पर्दछ । त्यसको लागी हामिले समाजवादलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
समाजवाद प्रति उहाँको प्रष्ट कुरा थियो । समाजवाद भन्न वित्तिकै राष्ट्रिय पँुजीको निर्माण र त्यसको न्यायोचित वितरण । अर्काे शब्दमा भन्ने होे भने सामाजिक विभेदको अन्त्य र सामाजिक सुरक्षा ।
यो दुई कुरा लाई जव हामि सँगसँगै लिएर जान सक्दैनौं तव समाजको विकास हुन सक्दैन । आर्थिक विकास हुन सक्दैन । यसले समाजमा हुने र नहुने मान्छेहरु बिच दुरी बढाउछ । द्धन्द सिर्जना हुन्छ र त्यसले मानविय संवेदनालाई कठोर आघात गर्दछ ।
विपिमा राष्ट्रको लागी आफैलाई होम्न सक्ने ईच्छाशक्ती, भावना र समर्पन थियो । उहाँ भन्नु हुन्थ्यो – राष्ट्र भन्दा माथि कोहि छैन । राष्ट्र नरहे म पनि रहन्न । प्रजातन्त्र पनि रहन्न । त्यसैले राष्ट्र सवभन्दा ठुलो हो ।
समाज भित्र रहेका सवै, वर्ग, जाति, समुदाय, लिङ्ग सवैलाई एउटै सुत्रमा जव हामी उन्न सक्दैनौं तव नेपाल राष्ट्र बलियो बन्न सक्दैन । हामिले सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न सकेनौं र दलित, शोषित, अपहेलित, सामाजिक रुपमा पछि पारिएका मानिसहरुलाई जवसम्म आर्थिक, राजनितिक मुलधारमा ल्याउन सक्दैनौं तवसम्म राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन । होइन भने त्यस्तो राष्ट्रियता खोक्रो राष्ट्रियता हुन्छ । खोक्रो राष्ट्रियताले सत्तामा जान त सकीएला तर जनतालाई जोड्न सकिदैन र राष्ट्रको मियो बलियो हुदैन भन्ने कुरा विपिले सधै भन्नु हुन्थ्यो ।
एउटा अर्काे सम्झना छ । एक पटक म जिल्ला फर्किदै थिए । फर्किदा विपिलाई सोधे – सान्दाजु म जिल्ला फर्किदै छु , के छ सन्देस ? त्यतिवेला उहाँको स्वास्थ्य पनि अलि कमजोर थियो । तर उहाँले दिएको जवाफ अहिले पनी मेरो मन भित्र छ । जवाफमा उहाँले भन्नु भयो – अव तपाईहरु वयस्क भैसक्नु भयो । मैले धेरै कुरा तपाईहरुलाई भन्नु केही छैन । मैले यो गर्नुस त्यो नगर्नुस भनेर भन्दीन । जतिखेर तपाईहरुलाई के गर्ने के नगर्ने दुविधा पर्छ । त्यसवेला यो राष्ट्रको एक मुठ्ठी माटो लिनुहोला र त्यसै सँग सोध्नुहोला । त्यसले तपाईलाई जे निर्देश गर्छ, त्यहि किसमले काम गर्नु होला । मेरो निर्देशन यत्ति नै छ । उहाँको यो भनाई अहिले पनि ताजा लाग्छ । भर्खरै सुने जस्तो लाग्छ ।
मलाई सम्झना छ – विपि कोइरालाले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठुला कल्पना त गर्नु भएन । आफै पनि भन्नु हुन्थ्यो म अर्थशास्त्री होइन । तर त्यो हुदाहुदै पनि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो – म चाहन्छु , मेरो जस्तै सवै नेपालीको एउटा सानो घर होस । एउटा दुहुनु गाई होस । वालवालिकाले स्कूलमा पढ्न पाउन । औषधिमुलोको व्यवस्था होस । मैले बुझेको समाजवाद त्यहि हो ।
उहाँले सधै के भन्नुभयो भने नेपाल गाउँमा बस्छ । यि ठुलाठुला भब्य अट्टालिकाहरु नेपाल होईनन । र जवसम्म हामि गाउँको प्रगती गर्न सक्दैनौं तवसम्म देशको बिकासको कल्पना गर्न सक्दैनौं ।
यतिसम्म की उहाँ आफु प्रधानमन्त्री भएको वेला योजना आयोगमा जाँदा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो – यहाँ राजाको तस्वीर र मेरो तस्वीर राख्ने होइन । यहाँ एकजना हलो जोत्ने गरिव किसानको फोटो राख्नोस र उस्को तस्वीर हेरेर योजना कार्यक्रम बनाउनुस ।
नेपालको अर्थतन्त्र गाउँले धान्ने अर्थतन्त्र हो र त्यो अर्थतन्त्र गाउँ बाटै सुरु हुन्छ । त्यसैले अहिले हामी ठुलाठुला एरपोर्टका कुरा नगरौं । गाउँमा जाने बाटोघाटो, पानि पधेरो, पुलपुलेसो, कुलो नाला, स्वास्थ्य शिक्षा यि आधारभुत कुराहरुलाई नै हामीले बिकासको मोडलको रुपमा लैजानु पर्छ । राष्ट्रको क्षमता र ग्रामिण क्षेत्रका जनताको चाहानामा सन्तुलण कायम गर्नु पर्छ ।
तसर्थ जव हामी सत्तामा पुग्यौं तव हामीले यि सवै क्षेत्रमा काम गर्ने दिशामा अग्रसर हुदै थियौं यद्यपि देशमा भएका विभिन्न राजनितिक, सामाजिक उथलपुथलले हाम्रो ति मनोकाङ्क्षा पुरा हुन सकेनन् ।
आज पनि यो मुलुकलाई बलियो बनाउन, जनतालाई समृद्ध र शसक्त बनाउन, लोकतन्त्रको स्थापना गर्न र मुलुकलाई समाजवादि अर्थतन्त्र तिर लिनुपर्छ भन्ने भन्ने विपिले देखाएका जुन आधारभुत मुल्य,मान्यता र आदर्श हुन ति बाट नेपाली काङ्ग्रेस विचलित भएको छैन । र यि कुरामा काङ्ग्रेस भित्र सैद्धान्तीक मतदभेद छैन ।
यद्यपि यसको कार्यन्वयन कहाँसम्म भयो भन्ने कुरा हामिले समिक्षा गर्ने विषय हो । बिषेशगरी जनजिविकाका सवालमा हामि समाजवादी बाटोमा जान सक्यौ की सकेनौं ? वा त्यतिखेरको समाजवाद र अहिलेको समाजको सन्दर्भ मिल्छ की मिल्दैन ? कहीनेर समाजवादको परिभाषा बदलिएको पो हो कि ? त्यो कुरालाई पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जननायक विपि कोइराला प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन !
(३८ औं विपि स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पुर्व केन्द्रीय सदस्य डिल्लीराज रेग्मी सँग गरिएको कुराकानीमा प्रस्तुत बिचारको सम्पादित अंश ।)
#डिल्ली रेग्मी #विपी कोइराला
आज ३८ औं विपी स्मृति दिवस, को हुन् जननायक विपी कोइराला ?
सल्यान काङ्ग्रेसले सम्झियो विपीलाई, मनायो स्मृति दिवस
हामि नसच्चिए समाप्तिको राजमार्ग तम्तयार छ